यी खानेकुरा नियतिरूपमा खानुहोस्, जसले रोग लाग्नबाट बचाउँछ ? – Social Touch Khabar
कोरोना जित्न सरकारलाई दोष होइन, आफैं सचेत बनौं !
सङ्क्रमण नदेखिएका कोरोना संक्रमित ‘होम आइसोलेसन’मा
Fighter Plane Crash During World War
Social Touch Khabar
साइन टच TV
यी खानेकुरा नियतिरूपमा खानुहोस्, जसले रोग लाग्नबाट बचाउँछ ?
सोसलटच खबर August 29, 2020
काठमाडौँ । रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि हाम्रो शरीरलाई विभिन्न खाद्यवस्तुहरुको आवश्यकता पर्दछ । रोग प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास गर्न हाम्रा दैनिक आहारमा केही विशेष चीजहरू समावेश गर्नुपर्दछ जसले हाम्रो इम्यु सिस्टम थप मजबुद बनाओस । त्यसमध्ये केही खानेकुराहरु यहाँ समावेश गरीएको छ ।
भिटामिन सीको अधिकतम मात्रा क्याप्सिकममा पाइन्छ । अमेरिकी कृषि विभागका अनुसार एक कप काटिएको भेडेखोर्सानीमा करिब २११ प्रतिशत भिटामिन सी हुन्छ, जुन सुन्तलामा पाइने भिटामिन सीभन्दा दोब्बर हुन्छ । २०१७ मा नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थमा प्रकाशित एउटा अध्ययन अनुसार, भिटामिन सीले शरीरको कोशिकालाई सुदृढ पार्छ । जसले प्रतिरक्षा प्रणाली वृद्धि गर्छ । यसले श्वसन संक्रमणको जोखिमलाई पनि कम गर्दछ ।
ब्रोकालीमा पनि भिटामिन सीको खानी मानिन्छ । आधा कप ब्रोकलीमा ४३ प्रतिशत भिटामिन सी पाइन्छ । स्वास्थ्य संस्थाका अनुसार तपाईको शरीरलाई दैनिक विटामिन सी चाहिन्छ । अमेरिकाको ईएचई स्वास्थ्यमा चिकित्सक डाक्टर सीमा सरिनका अनुसा “ब्रोकली फाइटोकेमिकल्स र एन्टिआक्सिडन्टहरु पाइन्छ । जसले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ । यसमा भिटामिन ई पनि पाइन्छ । जुन एक एन्टिआक्सीडन्ट हो जसले ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूसँग लड्न मद्दत गर्दछ ।
चनामा धेरै मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ । यसमा एमिनो एसिडले बनेको आवश्यक पोषक तत्व पाइन्न्छ । जसले शरीरको टिस्यूहरू बढाउन र बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ । एकेडेमी न्यूट्रिशन एण्ड डायटेटिक्सका अनुसार यसले एनजाइमहरू ठीकसँग राख्दछ । जसले हाम्रो शरीरको प्रणाली सही ढंगले कार्य गर्न सक्दछ । डाइटिसियन एमिली वन्डरका अनुसार जिंकको मात्रा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ जसले प्रतिरक्षा प्रणाली र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया नियन्त्रण गर्दछ ।
डाइटिसियन एमिली वन्डरका अनुसार आधा कप स्ट्रोबेरीले एक एक जना मानिसलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन सीको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि पर्याप्त हुन्छ । किनकि आधा कप स्ट्रोबेरीमा ५० प्रतिशत भिटामिन सी पाइन्छ । एमिली भन्छिन्, “हाम्रो कोषहरू बिभिन्न तरिकामा बिग्रन्छन्,वातावरणको कारण र भिटामिन सीले तिनीहरूलाई बिगार्नबाट रोक्छ ।“
डाक्टर सीमा सरीनका अनुसार लसुनले खानामा स्वाद मात्र बढाउँदैन, यो स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै लाभदायक हुन्छ । जस्तै रक्तचाप र मुटु सम्बन्धी जोखिम कम गर्छ । लसुनमा पाइने सल्फर कम्पाउन्डको कारणले गर्दा यसले संक्रमणसँग लड्न मद्दत गर्दछ । यस बाहेक यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँदछ । लसुनले चिसो र खोकीबाट शरीर बचाउन छ ।
डाइटिसिएसन एमिली वन्डरका अनुसार भिटामिन डीको उत्तम स्रोत हो । तर यसले च्याउ लगायतका केही खानाहरू मार्फत पनि पाउन सकिन्छ। । २०१८ मा भिटामिन डी स्रोत खोजी गर्दा च्याउहरूको प्रयोगको बारेमा समीक्षा भएको थियो । च्याउमा क्याल्सियमको मात्रा बढाउँदछ जसले हड्डीहरूका लागि राम्रो हुन्छ ।
स्डाइटिसिएन डाक्टर सरीनका अनुसार पालुंगो भिटामिन सी र एन्टिआक्सिडन्टले समृद्ध छ । जसले हाम्रो कोषहरूलाई पर्यवरणबाट हुने क्षतिबाट बचाउँछ । थप रूपमा यसले बीटा क्यारोटीन पनि समावेश गर्दछ, जुन भिटामिन एको मुख्य स्रोत हो ।
दही प्रोबायोटिक्सको उत्तम स्रोत हो । डा. सरिनका अनुसार यो राम्रो जीवाणु हो । जसले प्रतिरक्षा प्रणाली र पाचन प्रणालीलाई सही राख्छ । केही अध्ययनहरूले प्रोबियोटिकहरूले सामान्य चिसो र इन्फ्लूएन्जा जस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रमणमा पनि प्रभावकारी भएको पाइएको छ ।
नेपालमा हालसम्मकै बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाईं
करोडौँ रूपैयाँमा सञ्चालन हुने भनिएका एग्रोमार्ट कता हराए ?
developed by a1soft | Design & develop by AmpleThemes